Ederede a otutu na ugbu a gị SMS igbe akwụkwọ ozi dị jupụtara? Na-enweta ọhụrụ ederede ozi, ị nwere ka ihichapụ ochie omume. Otú ọ dị, ndị a ozi ederede pụrụ idekọ obi ụtọ na anya mmiri banyere ndụ gị. Ozugbo ị ihichapụ ndị a ederede ozi, ị ga-atụfu ha ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ na-akụda mmụọ.
Na nke a, ọ bụ a mkpa nkwado ndabere na mpaghara ozi ederede site na iPhone na kọmputa ma ọ bụ ígwé ojii mbụ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ha niile dị ka amasị gị. Iji ndabere gị iPhone ederede ozi, ị nwere 3 ụzọ na-eso. Ugbu a, na-agụ na ọ bụla usoro, ma họrọ otu ezigbo onye na-eme iPhone ozi ndabere.
Method 1. ndabere iPhone SMS / MMS / iMessages na 1 Pịa na MobileTrans Method 2. ndabere SMS / MMS / iMessages si iPhone ka Computer na iTunes Method 3. ndabere iPhone Text Ozi / iMessages / MMS ka iCloud
Method 1. ndabere iPhone SMS / MMS / iMessages na 1 Pịa na MobileTrans
I nwere ike amasị ndabere iPhone ozi ederede / MMS / iMessages dị ka a printable faịlụ, otú i nwere ike mfe agụ ya ma na-eji ya dị a àmà ihe. Ebe a bụ nri iPhone ozi nkwado ndabere na mpaghara ngwá ọrụ aha ya bụ Wondershare MobileTrans (Win) ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac.
Ngwá ọrụ a na-enye gị ka ị na nkwado ndabere na mpaghara niile ozi ederede, MMS, iMessages na attachements na kọmputa gị na 1 Pịa. I nwekwara ike weghachi gị iPhone ma ọ bụ Android ekwentị mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Otu iPhone na-agba ọsọ iOS 5/6/7/8/9
An Apple eriri USB
Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac
A Windows PC ma ọ bụ Mac na iTunes arụnyere
MobileTrans Ndabere gị iPhone SMS na faịlụ nke ị nwere ike kpọmkwem na-agụ. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe iPhone SMS ozi nkwado ndabere na mpaghara ngwá ọrụ nke na-ahapụ ị na-agụ SMS, biko atụgharị Wondershare TunesGo. Ọ na-enyere gị ndabere nile iPhone SMS, MMS, iMessages na Mgbakwụnye na kọmputa na echekwa dị ka TXT / HTML / XML faịlụ mfe.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone na kọmputa
Nke mbụ niile, jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB. Ẹkedori MobileTrans na gị Windows PC ma ọ bụ Mac. The iPhone SMS ndabere ngwá ọrụ ga-ozugbo ịchọpụta gị iPhone. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe isi window.
Nzọụkwụ 2. ndabere iPhone ozi ederede, MMS na iMessages
Pịa Back Up ekwentị gị ịbanye ndabere window. Gaa n'etiti nwaanyị di ya nwụrụ na nne Mmetụta Text ozi. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy nkwado ndabere na mpaghara iPhone SMS ozi na kọmputa.
Method 2. ndabere SMS / MMS / iMessages si iPhone ka Computer na iTunes
Dị ka ị maara, iTunes nwere ike ndabere fọrọ nke nta niile faịlụ gị iPhone, gụnyere SMS, MMS na iMessages. Ọ bụrụ na ị na-achọ a free ngwá ọrụ ime iPhone SMS, iMessage na MMS ndabere, iTunes-abịakwute gị. Otú ọ dị, i nwere mara na iTunes adịghị ekwe ka ị selectively ndabere iPhone SMS, iMesages, MMS. Ka njọ, iTunes ndabere faịlụ bụ unreadable. Ị nwere ike na-agụ ya ma ọ bụ na-ebipụta ya. N'ụzọ ọ bụla, nkwado ndabere na mpaghara iPhone iMessages, MMS, na SMS, biko soro nkuzi.
Nzọụkwụ 1. Run iTunes na kọmputa gị na-eji eriri USB jikọọ gị iPhone na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ahụrụ, gị iPhone-egosi na n'elu aka ekpe sidebar nke iTunes.
Nzọụkwụ 3. N'okpuru NGWAỌRỤ, pịa gị iPhone. Mgbe ahụ, gị iPhone akara panel a ga-emere na nri.
Nzọụkwụ 4. Pịa Summary ma pịgharịa gaa na ala window ruo mgbe ahụ backups ngalaba. Tinye akà rà kọmputa a na pịa Back Up Ugbu a.
Nzọụkwụ 5. iTunes-amalite ndabere gị iPhone data, gụnyere iPhone MMS, SMS, iMessages. Ọ na-ewe gị oge ụfọdụ. Chere ruo mgbe ọ na-abịa na njedebe. Chọta gị iPhone ndabere ọnọdụ ebe a >>
Method 3. ndabere iPhone Text Ozi / iMessages / MMS ka iCloud
Ọtụtụ ndị na-comfuseded ma iCloud nwere ike ndabere SMS on iPhone. N'ezie, ọ pụrụ. E wezụga SMS, ọ na-Akwadoo elu iPhone iMessages na MMS. N'okpuru ebe bụ zuru nduzi. Soro m.
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala na gị iPhone. On Isetịpụ ihuenyo, pịgharịa gaa na ala iji chọta iCloud na enweta ya.
Nzọụkwụ 2. Tinye iCloud akaụntụ. Jide n'aka na gị WiFi netwọk agbanwuru.
Nzọụkwụ 3. On iCloud ihuenyo, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe oyiyi, na dị ka ana-akpo, edeturu. Tụgharịa na ha ma ọ bụrụ na ị na-achọ ndabere ha. Mgbe ahụ, mgbata jikota.
Nzọụkwụ 6. Chere ruo mgbe nkwado ndabere na mpaghara usoro bụ zuru ezu
> Resource> iPhone> 3 Ụzọ Ime iPhone SMS ndabere